သက်တန့်ရောင်စုံ နယူးဇီလန် – Ye Htut's Blog
Posted byye htut November 19, 2020 November 19, 2020 Posted inElection, PoliticsTags:NewZealand, yehtutarticle
ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ အင်အားနည်းအုပ်စုတွေ ဖြစ် တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူတွေ၊ LGBTQ တွေ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ပါဝင်သလဲဆိုတာကို အလေးထားသုံးသပ်လေ့ရှိ တယ်။ ကိုယ်စားပြုမှုများပြားစုံလင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလွှတ်တော်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အုပ်စု အားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်လို့ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ကြ တယ်။
၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ လွှတ်တော်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်စားပြုမှုအစုံလင်ဆုံး လွှတ်တော်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ CNN သတင်းမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
၁၈၄၀ ပြည့်နှစ် အင်္ဂလိပ်တွေ သိမ်းပိုက်ကိုလိုနီ မပြုခင်အထိ နယူးဇီလန်နိုင်ငံလို့ဖြစ်လာမယ့် ကျွန်းတွေမှာ အခြေချနေထိုင်သူတွေက မောဝ်ရီ Māori လို့ခေါ်တဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၈၅၂ ခုနှစ် နယူးဇီလန်ပါလီမန်ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာ မောဝ်ရီတိုင်းရင်းသား တွေ မဲပေးခွင့်မရသလို ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်လည်းမရဘူး။ ၁၈၆၇ ခုနှစ်မှာတော့ မော်ဝ် ရီ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လေးနေရာသတ်မှတ်ပေးပြီး အဲဒီကိုယ်စားလှယ် နေရာတွေအတွက်ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်နဲ့ မဲပေးခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ မော်ဝ်ရီတိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုတိုးချဲ့လာခဲ့တဲ့အတွက် ၁၉ ၆၇ မှာတော့ အခြားလွှတ်တော်နေရာတွေအတွက်ပါ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရလာခဲ့တယ်။ အခု အချိန်မှာ တော့ မော်ဝ်ရီတိုင်းရင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံအဆင့်ပါတီကြီးတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေအဖြစ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီအသီးသီးကနေ မောဝ်ရီတိုင်းရင်းသားအမတ် ၂၅ ဦး၊ အမတ်ဦးရေ ၁၂၀ ရှိတဲ့လွှတ်တော်ရဲ့ ၂၁% ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့ဲတဲ့ ၂၀၁၇ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၃% ရွေးချယ်ခံရတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့ ကျဆင်းသွားတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ လူဦးရေ ရဲ့ ၁၇% ပဲရှိတဲ့ မောဝ်ရီတွေအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာ ၂၁% ကိုယ်စားပြုခွင့်ရရှိတယ်ဆို တာ အတော်အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
( ပုံ ၁ )
လက်ရှိအာဏာရ လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်က အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဇီလန် နိုင်ငံရေးမှာ အစဉ်အလာအရလည်း အမျိုးသမီးတွေကိုယ်စားပြုမှုအားကောင်းခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇ ရွေး ကောက်ပွဲကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၈% က အမျိုးသမီး တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့လွှတ်တော်မှာတော့ ၄၈% က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၅၀.၈၄% က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ အတွက် လွှတ်တော်အတွင်းကိုယ်စားပြုမှုအချိုးအစားက သင့်တော်တဲ့အချိုးအစားလို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။ ( ပုံ ၂ )
ဒါ့အပြင်နယူးဇီလန်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာနေပြီဖြစ်တဲ့ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်း အမျိုးသမီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မှုအချိုးအစား အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာက OECD နိုင်ငံတွေရဲ့ လွှတ်တော်များမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုက ပ ျှမ်းမ ျှ ၃၁ % ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု ၃၁% နဲ့အထက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာပါပဲ ။ ( ပုံ ၃)
နိုင်ငံတကာမှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ပြဿနာအတက်ဆုံး၊ အငြင်းပွားမှု အများဆုံး ဖြစ်တဲ့ LGBTQ တွေက နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုယ်စားပြုမှုအားကောင်းခဲ့ တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ LGBTQ အုပ်စုဝင်တွေ လွှတ် တော်အမတ်အဖြစ်ရှိနေတာ ၄၂ နိုင်ငံပဲရှိပြီး လွှတ် တော်အမတ် စုစုပေါင်း ၁၉ ၄ ဦးပဲရှိတယ်။
အဲဒီထဲမှာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံက ၁၃ ဦးပါဝင်ပြီး နိုင်ငံ လွှတ်တော်အမတ်စုစုပေါင်းရဲ့ ၁၁ % ရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ်စားပြုမှုအချိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်လွှတ်တော်မှာ ၇% ရှိရာကနေ တိုး တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ( ပုံ ၄)
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ အာရှနွယ်ဖွားတွေကတော့ လူဦးရေရဲ့ ၁၅% ရှိပေမယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ ၇% ပဲရှိတယ်။ ပစိဖိတ်ကျွန်းအနွယ်ဖွားတွေကတော့ လူဦးရေရဲ့ ၈% ရှိပြီး ကိုယ်စားပြုမှု ၉ % ရထားပါတယ်။ အခြားအနွယ်ဖွားတွေကတော့ လူဦးရေရဲ့ ၃% ၊ ကိုယ်စားပြုမှု ၃% ရှိပါတယ်။ ဒီအချိုးအစားဟာလည်း အုပ်စုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့အချိုးအစား ဖြစ် ပါတယ်။ ပုံ (၅)
လေဘာပါတီဝန်ကြီးချုပ် Jacinda Ardern ရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စား ပြုမှုအခြေအနေကို ထင်ဟပ်နေတယ်။ ဝန်ကြီး ၂၀ ဦးပါဝင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၈ ယောက်က အမျိုး သမီးတွေဖြစ်တယ်။ လေးပုံတစ်ပုံက မောဝ်ရီတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က LGBTQ ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထားသူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မောဝ်ရီ တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး မျက်နှာမှာ မောဝ်ရီရိုးရာတက်တူးထိုးထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသမိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ ပထမဆုံးမောဝ်ရီအမျိုး သမီးဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ ၆)
နိုင်ငံလွှတ်တော်အတွင်းမှာ ကိုယ်စားပြုမှုများပြားစုံလင်တာဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာ မှု၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုသူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အဆို က ရာနှုန်းပြည့်တော့မမှန်ဘူး။ အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာ အခု နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်အထိ အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၁ ဦး ၂၃.၂% ပဲရှိတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ ပျမ်းမ ျှနှုန်းဖြစ်တဲ့ ၂၅% ထက်နည်းတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ရဝမ်ဒါမှာတော့ အောက်လွှတ် တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၆၉ % က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတယ်။
ဒီမိုကရေစီအခြေမခိုင်သေးတဲ့ လက်တင်အမေရိက မက္ကဆီကို၊ ကိုစတာရီကာ၊ ဘိုလီးဗီယား၊ ဗင်နီဇွဲလား နဲ့ အီကွေဒိုနိုင်ငံများရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီ များအနေနဲ့ လွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလျာထားတဲ့အခါ ကျား ၊ မ တန်းတူညီမ ျှရှိဖို့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ တကယ်မဲပေးရွေးချယ် တဲ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေရွေးချယ်ခံရမှုက နည်းပါးနေဆဲပဲ ဆိုပေမယ့် ဥပဒေအရ အခြေခံကောင်းတစ်ခုတော့ ရထားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။
လက်တွေ့ကျကျ သုံးသပ်ရရင်တော့ ကိုယ်စားပြုမှုဟာ လူဦးရေအချိုးစားအတိုင်းဖြစ်ရမယ်၊ အုပ်စု တိုင်းပါရမယ်လို့တော့ အတိအကျတောင်းဆိုလို့တော့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် အုပ်စုတစ်ခုခုက သူတို့ကို အပယ်ခံထားရတယ် လို့ ခံစားချက်မဖြစ်အောင် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်အရဖြစ်ဖြစ်၊ အခြား ဥပဒေများနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဖြစ်ဖြစ်ကူ ညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်စုံပန်းခင်းဟာ ပန်းတစ်မျိုးတည်းပွင့်တဲ့ ပန်းခင်းထက်တော့ လှပတာအမှန်ပါပဲ။
၁။ New Zealand has just elected one of the most diverse parliaments in the world. CNN , 17 November 19, 2020.
၂။ Gender and constitutionalism in Mexico: from quotas to parity?
Gender Mexico By José Miguel Cabrales Lucio, IDEA.